I-China i-HRC ye-NC yokubonisa abenzi kunye nabathengisi | Mingtaishun
Uyilo olungqiniweyo luphucula ukuqina kunye nokugqiba umphezulu ngokufanelekileyo. Ukusika umda ngaphezulu kweziko kunciphisa ukumelana nokusika. Umthamo ophakamileyo wesibonelelo se-junk slot ukususwa kwe-chip kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle kwemishini. Uyilo lweembande ezi-2 lulungile ekususeni i-chip, kulula ekusebenziseni ngokuthe nkqo ukutya, kusetyenziswa ngokubanzi kwislot, iprofayili, kunye nokuqhutywa kwemingxunya.
I-MTS-3 * 8 * 3 * 50 3 8 3 50 2 0
I-MTS-4 * 10 * 4 * 50 4 10 4 50 2 0
I-MTS-5 * 13 * 5 * 50 5 13 5 50 2 0
I-MTS-6 * 15 * 6 * 50 6 15 6 50 2 0
I-MTS-6 * 15 * 6 * 75 6 15 6 75 2
I-MTS-6 * 15 * 6 * 100 6 15 6 100 2
I-MTS-8 * 20 * 8 * 60 8 20 8 60 2 0
I-MTS-8 * 20 * 8 * 75 8 20 8 75 2
I-MTS-10 * 25 * 10 * 75 10 25 10 75 2 0
I-MTS-10 * 40 * 10 * 100 10 40 10 100 2 0
I-MTS-12 * 30 * 12 * 75 12 30 12 75 2 0
I-MTS-12 * 45 * 12 * 100 12 45 12 100 2 0
1. Izixhobo eziphambili kunye nezixhobo zovavanyo: iAustralia iAnca, iJamani iWalter kunye neJamani EOUER izixhobo zokuvavanya izixhobo
2. MOQ Low: 10pcs imfuyo kunye 20pcs ulwenziwo.
3. I-OEM kunye ne-ODM yamkelwe: Nawuphi na uyilo ngokwemizobo yakho okanye iisampulu.
4. Inkonzo elungileyo: Simisele ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu
5. Isitokhwe: Isitokhwe esikhulu semigangatho yokuphela esemgangathweni.
6. Umgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo: Owona mgangatho uphezulu kunye namaxabiso afanelekileyo. Izaphulelo ezahlukileyo ezisekwe kubungakanani
7. Amava atyebileyo: Sibe ngabavelisi ngaphezulu kweminyaka eli-10 kule nkalo.
I-8,100% ekuhanjisweni kwexesha: Sinesitokhwe esikhulu, ke ngoko sinokulungiselela ukuhambisa ngokukhawuleza.
9.Ukuchaneka okuphezulu kwemigca yokuvelisa ye-CNC: Sinemigca emininzi yokuvuthwa kunye ne-CNC epheleleyo.
Siye saseka ubudlelwane intsebenziswano ixesha elide kunye nabathengi ezininzi.
Egqithileyo Ukugaya khabhayithi iintonga